UKUQEQESHWA KWEQHINGA - IChapman Technology Co.
Ifowuni: + 86-0755-2826 9320
UKUQULUNQWA KWEZINTO EZINCINANE
FAKA UKUJONGA KUNYE NOKUGQIBELA
I-LSR kunye nokuBumba kweRubber
I-LSR kunye neRUBBER
Ukuveliswa kweLSR kunye neRubber
Umshini wokugaya i-CNC ngumatshini wokugaya amandla nge-CNC (iComputer Numerical Controlled) isilawuli, esetyenziselwa ukusila iimilo ezi-2D / 3D okanye iipateni kwizinto ezahlukeneyo. I-CNC yokugaya yindlela ye-CNC yokuchwela efana nokubaza nokusika, kwaye iyakwazi ukufikelela kwimisebenzi emininzi eyenziwa ngoomatshini bokucheba nokukrola. Njengokukrola, ukusila kusetyenziswa isixhobo esijikelezayo se-cylindrical. Nangona kunjalo, isixhobo esikwi-CNC sokusila siyakwazi ukuhambahamba kwi-axis ezininzi, kwaye sinokwenza iintlobo ngeentlobo zeemilo, iindawo zokubeka kunye nemingxunya. Ukongeza, i-workpiece ihlala ihanjiswa kwisixhobo sokugaya kumacala ahlukeneyo. Ukuze uzuze ngakumbi kwimakethi, UMenzi weChapmanInkampani ihlala ityala imali kwisantya esiphezulu se-CNC yezixhobo zokusebenza. Sineeseti ezi-4 zokukhawulezisa izixhobo ze-MAKINO ezivela eJapan, ezichane ngokufikelela kwi-0.005-0.01mm.
Ukongeza, sikwanazo noomatshini be-4 CNC bokugqiba kunye nokurhabaxa kwe-2.
UMenzi weChapmanIzixhobo zokwenza i-CNC zinokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho zokuqhubekeka, kungekuphela kokufaka ukungunda, ukungabinanto, iindawo zokubumba, kodwa sinokubonelela ngeenkonzo ze-CNC zokwenza izinto ngobuninzi bezahlulo zabathengi abathile.
Ukuchithwa kombane (EDM), okwabizwa ngokuba yi "spark" machining, yitekhnoloji esele ikho. Ngexesha lenkqubo ye-EDM, umbane uyalelwa ukuba udlule phakathi kwe-elektrode kunye nendawo yokusebenza eyahlulwe lulwelo lwe-dielectric, esebenza njengesixhobo sombane sombane. Nje ukuba kufakwe ivolthi ephezulu ngokwaneleyo, umbane we-dielectric uyacinywa kwaye uguqula ube ngumqhubi wombane kwaye ukoyike indawo yokusebenza ngokukhupha ukukhutshwa kwentlantsi ukuyibumba ngendlela oyifunayo okanye imilo yokugqibela.
Xa usebenza ngaphakathi kokunyamezelana okuqinileyo okufunekayo kushishino lweMold, kubalulekile ukufaka oomatshini abafanelekileyo. I-EDM (uMatshini oKhupha uMbane) oomatshini bokuSika ii-Wire basebenzisana kunye neengcali zethu zoomatshini eziqinisekisiweyo kunye nesebe lobunjineli, zibonelela ngokuThengisa ngokubanzi ngokuchanekileyo okufunekayo ukuze kwenziwe ngaphakathi kolu shishino.
Wokugaya yinkqubo machining usebenzisa abasiki rotary ukususa izinto ngokuqhubela mgawuli ibe iqhekeza umsebenzi. Oku kunokwenziwa ngokwahlukileyo kwicala elinye okanye elinamazembe amaninzi, isantya sentloko, kunye noxinzelelo.
Kwezinye izinto zokubumba ezichanekileyo, ukuchaneka kokufakwa kweZinto zethu, ophakamisa, ukutyibilika, kunye nezinye izinto zokubumba kubaluleke kakhulu. Ngokubanzi, ukuchaneka kokuqhubekeka kwesixhobo sethu sokusila kufuneka sibe ngaphakathi kwe-0.005mm.
Kufanelekile ukungunda kunye neNdibano:
Kukho amaqela asi-8 kwindibano yethu yokufundela ukungunda. Amaqela amahlanu okubumba anoxanduva lokuvelisa ukungunda okuthumela ngaphandle, kwaye amanye amaqela amathathu acwangciselwe ukungunda kosapho lwethu.
Emva kokuba ukungunda kufanelekile kugqityiwe, kufuneka sigcine ukungunda kwaye siyipolishe. Qinisekisa ukuba umgangatho sokubumba uyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zovavanyo ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka.
I-Ofisi ye-ShenZhen: i-1113, i-Hengping Dong Road, isitalato i-Yuanshan, iSithili sase-Longgang, isiXeko sase-Shenzhen, kwiPhondo lase-Guangdong, e-China.
I-Skype: Isithuthi sikaCarina_2600
Ukuphuculwa kweMveliso kuBuso be-COVID-19
I-COVID-19 Ngelixa loyikekayo, amaxesha obunzima ...
Abenzi bomngundo bajolise ekufumaneni okulandelayo ...
Njengolunye urhwebo oluninzi nangakumbi ...
LSR ulwelo isicelo abicah ukungunda
Ulwelo lwesilica gel lufinyezwe njenge-LSR, ...